Igbo Mass Readings for December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n'Oge Adventi
December 11, 2021 April 10, 2021 by lectionary
2 Ihe Ogugu nke mbu – 49:2, 8-10
3 ABUOMA NA AZIZA – Ps: 72: 1-2, 3-4, 7-8, 17.
5 Oziọma – Matiu 1:1-17
7 EKPERE ANATACHA ORIRI NSO
8 Today’s Mass Readings in Igbo Language – December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị – Catholic Lectionary
Igbo Mass Readings for December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị.
Nke a bụ Igbo Mass Readings maka December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị .
Nna, Onye Okike na Onye Nzọpụta nke mmadụ, ngịnwa tiri iwu, okwu Gị ewere bụrụ mmadụ, amụọ Ya na Virgin Marịa. Mee ka anyị keta oke n’ịbụ Chukwu nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi Onye wedatara onwe Ya ala iji keta oke n’ụdị anyị bụ mmadụ. Site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi Nwa Gị…
Ihe Ọgụgụ nke mbụ – 49:2, 8-10
Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ Jenesis
Jekọb kpọrọ ụmụ ya, sị ha, “Gbakọtanụ ọnụ ka m gwa ụnụ ihe kwụ eche ụnụ n’ọdịniihu. Nọruwenụ m okirikiri ụmụ Jekọb, ka ụnụ gee nna ụnụ Izrel ntị. Juda, ụmụnne gị ga-eto gị; aka gị ka Ị ga-eji dọgbuo ndị iro gi niile. Ụmụnna gị ga asọpụrụ gị. Juda, ị bụ nwa ọdụm. Site n’igbu anụ oriri, nwa m, ị gbagolitela. O hulatara ala; o dina na-ala ka ọdụm, dịka nne ọdụm; kedụ onye nwere ike imesu ya? Mkpara ọchịchị agaghị apụ na Juda. Ụmụụmụ ya ga na-achị mgbe niile.
ABỤỌMA NA AZỊZA – Ps: 72: 1-2, 3-4, 7-8, 17.
Nye eze ikpe nkwụmọtọ gị, O Chineke,
Ka ugwu ukwu na ugwu nta niile
wetara ndị nke gị ozi udo
N’ụzọ ziri ezi, ọ ga-azọpụta ụmụ ndị ogbenye
zọkwaa ụmụ ndị nọ na mkpa. Azịza
N’oge ya eziomume ga-achawapụta,
Alaeze ya ga-esi n’osimiri ruo n’osimiri,
Ngọzi dịrị aha ya ebeebe,
ka ọ dịgide dịka anyanwụ,
ka agbụrụ niile dị n’ụwa nweta ngọzi na ya,
ka mba niile kpọọ ya onye dị ngozi. Azịza
ALLELUỊA ALLELUỊA :
Bịa, amamihe nke Chineke anyị kachasị elu, iji ike n’ịhụnaanya n’echekwaba ihe niile i kere, kụziere anyị ka anyị n’aga ije n’ụzọ nke amamihe gị.
OZIỌMA – 1:1-17
Nke a bụ usoro agbụrụ Jesu Kristi, nwa Devid onye si n’agbụrụ Abraham. Abraham mụrụ Aịzik, Aịzik amụta Jekọb, Jekọb wee mụta Juda na umunne ya. Juda mụtara Perez na Zera ndị nne ha bụ Tama, Perez amụta Hezrọn; Hezrọn wee mụta Ram, Ram mụtara Aminadab, Aminadab amụta Nashọn, Nashọn wee mụta Salmọn. Salmọn mụtara Boaz onye nne ya bụ Rahab, Boaz amụta Obed onye nne ya bụ Rut, Obed wee mụta Jese, onye bụ nna eze Devid. Devid mụtara Solomọn site n’aka nwunye Uria. Solomọn mụtara Rehoboam, Rehoboam amụta Abija, Abija wee mụta Asa, Asa mụtara Jehoshafat, Jehoshafat amụta Joram, Joram amụta Uzia. Uzia mụtara Jotam, Jotam amụta Ahaz, Ahaz wee mụta Hezekaya, Hezekaya mụtara Manase, Manase amụta Emọn, Emọn wee mụta Josaya, onye nke mụtara Jekọnaya na ụmụnne ya, n’oge a dọkpụrụ ụmụ Izrel n’agha jee Babilọn. Mgbe a dọtachara ụmụ Izrel n’agha jee Babilọn, Jekọnaya mụtara Shealtiel, Shealtiel wee mụta Zerubabel, Zerubabel mụtara Abiud, Abiud amụta Eliakim, Eliakim wee mụta Azọ, Azọ mụtara Zadọk, Zadọk amụta Akim, Akim wee mụta Eliud, Eliud mụtara Elieza, Elieza amụta Matan, Matan wee mụta Jekọb. Jekọb mụtara Josef di Marịa bụ nne Jesu, onye a na-akpọ Kristi. Ya mere ọgbọ niile nke ụmụ Izrel site n’Abraham ruo na Devid dị ọgbọ iri na anọ. Site n’oge nke Devid ruo n’oge a dọkpụrụ ụmụ Izrel n’agha Babilọn ruo ọmụmụ Kristi dị ọgbọ iri na anọ.
Dinwenụ, gozie onyinye ndị a nke Nzukọ na ehunyere Gị ma site n’Eucharịstịa nke a were achịcha nke eluigwe nye anyị ndụ ọhụrụ. Anyị na-arịọ Gị ihe ndị a n’aha Kristi Dinwenụ anyị. Amen.
EKPERE ANATACHA ORIRI NSQ
Chineke Nna anyị, etu I si eji nri nke ndụ azụ anyi, sikwa etu ahụ nye anyị Mmụọ Gị ka anyị nwee ike iji ihè Ya na-amụkesị n’oge ọbịbịa nke Kristi Nwa Gị, Onye bụ Dinwenụ ebighị ebi, ebighị ebi. Amen.
Ihe Ogugu nke mbu – 49:2, 8-10
ABUOMA NA AZIZA – Ps: 72: 1-2, 3-4, 7-8, 17.
Aziza: N’oge ya eziomume ga-achawaputa, udo ga-adikwa ruo na njedebe uwa.
Oziọma – Matiu 1:1-17
Today’s Mass Readings in Igbo Language – December 17 2021, Fraịde Izuụka nke Atọ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị – Catholic Lectionary